Gudniinka Gabdhaha iyo xeerka Ilmo-iska-soo-ridka ee Puntland (Abortion law) | Baahin Media Warka Somalia iyo Somalida
WARARKA MAANTA Gudniinka Gabdhaha iyo xeerka Ilmo-iska-soo-ridka ee Puntland (Abortion law)
Gudniinka Gabdhaha iyo xeerka Ilmo-iska-soo-ridka ee Puntland (Abortion law)
Xukuumadda Puntland ee uu hoggaamiyo Siciid Cabdilaahi Deni ayaa dhowaan meelmarisay hindise-sharciyeed mamnuucaya gudniinka gabdhaha, waxana taasi ay dood adag ka dhex abuurtay bulshada reer Puntland iyadoo ay si wayn uga hor yimaadeen culimada iyo hoggaamiyayaasha dhaqanka. Bulshada reer Puntland oo ah mujtamac muxaafid ah ayaa u arkay tallaabadan mid lid ku ah dhaqanka Soomaaliyeed ee soo jireenka ah iyo shareecada Islaamka.
Barnaamijka gudniinka gabdhaha ma aha dhacdo iska timi laakiin waxay soo jiitamaysay muddooyin dheer waxana ka gaws-adaygay dhammaan madaxdii soo martay Puntland, oo u arkayey wax aan la aqbali Karin oo isla markaana abuuri kara kacdoon bulsho xilli dalku uu ku jiray xaalad adag oo dhinaca amniga ah.
Mashruucan gudniinka gabdhaha waxaa dabada ka riixayeyhay’adda Qaramada Midoobey ugu qaabilsan hawlaha dadka ee marka magaceeda la soo gaabiyo loo yaqaan UNFPA, waxana ay ku bixinaysaa lacag aad u tira badan. Qandaraaska mashruucan oo ay horay uga soo shaqeeyeen guddoomiyihii hore ee Mac-hadka SIDRA Guuleed Saalax, Xasan Cabdullaahi Deni iyo koox khuburo ah oo la shaqeeya ha’adda UNFP, ayaa hadda u muuqada inuu banaanka u soo baxay isla markaana uu soo maray hanaanka hindiise-sharciyadeed, waxana u dhiman in baarlamanka la hor-geeyo oo uu xeer rasmi ah noqdo, inkastoo uu waajahayo mucaaradnimo iyo ka-hor-imaansho aad u weyn oo dhinaca bulshada ah.
Waxaa xusid mudan in hindisahan uu tijaabo u yahay mid khatar badan oo la yiraahdo xeerka xaqa ilma-iska-soo-xaaqidda ama dhicisaynta (abortion law) ama ay u yaqaanaan abortion right. Sharcigan waxaa looga golleeyahay in haweenku ay xaq u yeeshaan inay ilmaha iska soo ridi karaan xilliga ay go’aansadaan, taasina waa xad-gudub qaawan oo ka dhan shareecada islaamka iyo dhaqanka Soomaaliyeed. Arrinta ilma-iska-soo-xaaqiddu ama dhicisayntu waa arrimaha ugu daga ee adduunka ka jira, waxana mamnuucay wadamada ugu waaweyn adduunka. Ilmo walba waxa uu xaq u leeyahay in uu dhasho oo si wanaagsanna u noolaado xitaa haddii aanu ku dhalan xayndaabka guurka. Qorshaha abortion-ka ama soo xaaqitaanka waxaa hoggaaminaya dadka kala ah Cabdiqaadir Maxamed Muuse, Sareedo Maxamed Xasan Jeyte iyo Dr Yusra Maxamed Yaasiin. Labadan xeer iyo iyo mashruucyadanwaa kuwo isku sidkan, oo haddii uu kan kowaad meelmaro ay tahay in la dedejiyo kan kale si loo wada dhaqan geliyo.
Isku-xiraha labadan barnaamij ee gudniinka iyo dhicisaynta ama abortion u qaabilsan madaxtooyada Puntland waa gabar lagu magcaabo Fatima Ibrahim Malta. Waxay kaloo xubin ka tahay urur feminist ah oo loo yaqaan LeadNow. Fatima waxay sidoo kale si bareer ah baraha bulshada ugu ololeysaa labadan barnaamij iyadoo la kulantay canbaarayn xooggan.
Dadweynaha reer Puntland oo intooda badan aan ka war qabin waxyaalaha ku geedaaman gudniinka gabdhaha iyo sida loogu isticmaalayo mashruuc lagu taajiro ayaa ku kala kala aragti duwanaaday, iyadoo in badan ay soo dhoweeyeen, halka qaar kaloo bandanna ay diideen. Markii ay soo baxday in arrintan ay tahay mashruuc khatar badan ayaa dad badan ka hor yimaadeen, waxaana dadkaasi ugu horreeya culimada, isimada iyo waxgaradka
Previous articleAdverts For a Wife For Sale
Next articleXubno ka tirsan guddiyada doorashada oo lagu eedeeyey inay dambiileyaal yihiin
Markab Shixnad Siday Oo Caariyey Iyo Cabsi Ay Qabaan Ganacsatadu &Halis laga digay
Maxay ka wada hadleen Qoor-qoor & Deni oo xalay kulan gaar ah yeeshay? (Sawirro)
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya oo Caawa ku dhaawaqaya Guddiga dib u heshiisiinta Galmudug
Agaasimihii Hore Ee NISA Jen.Gaafoow oo Xil Muhiim ah u sharaxan…
Qaar kamid ah shaqaalaha dowlada kuwooda ugu muhiim sanaa oo cabsi darteed loo fasaxay
DHAGEYSO:Gud Finish”Doorashadaan waxa laga cabsi qabaa dalka geliso bur bur cusub
Ciidama beeleedka maanta magaalada Boosaaso soo galay waxay ahayd mid la saadaalinayay maalmaahaan oo dhan sababo la xiriira tallaabada...